कोरियामा गुम्यो पाँच लाखको रोजगारीः नेपाली पनि प्रभावित « Lokpath
जीवन खत्री / सउल । कोरोना महामारीको प्रभावका कारण दक्षिण कोरियामा झण्डै पाँच लाख रोजगारी गुमेको छ । यति धेरै रोजगारी गुमेको यो दुई दशकयताकै उच्च हो । कोरियाको एक तथ्याङ्कानुसार गत महिना मात्र चार लाख ७६ हजारभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या सन् १९९९ पछिको सबैभन्दा बढी हो ।
विशेषगरी आफ्नै देशमै खपत हुने उत्पादनको निर्यातमा सामान्य गिरावट आए पनि पनि बाह्य निर्यात हुने सामग्रीमा भारी गिरावटका कारण काम घट्ने क्रम बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । दक्षिण कोरियाले अधिकांश उत्पादन विदेश निर्यात गर्छ । तथ्याङ्कानुसार रोजगारी गुमाउनेमा विशेषगरी १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा छन् । उनीहरूको संख्या कुल गुमेको रोजगारी संख्यामध्ये ४० दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात दुई लाख ४५ हजार छ । सबैभन्दा धेरै दुई लाख १२ हजार बढि रोजगारी होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यावसायमा गुमेको छ । सरकारले भने न्यून आय भएका जनताको निम्ति केही हप्तामै साढे पाँच लाखभन्द्या बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । रासस
प्रकाशित मिति: २०७७,बैशाख,३१,बुधबार २३:०१
नाजुक मोडमा वैदेशिक रोजगारी : के छ नेपालसँग विकल्प ?
कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीको अवस्था नाजुक स्थितीमा पुगेको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा आएको ह्रासका कारण वैदेशिक
गैँडाकोटमा मकै खेती प्रवद्र्धन गर्न कृषकलाई अनुदान
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिकाले मकै खेतीको प्रवद्र्धनका लागि सहकारीमार्फत कृषकलाई अनुदान दिने भएको छ । गैँडाकोटमा मकै खेती
सन् २०२२ सम्म विश्वमा बेरोजगारको संख्या २० करोड ५० लाख पुग्ने
बेइजिङ । कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष मात्र ७ करोड ५० लाखले रोजगारी गुमाएको अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ)ले जनाएको छ
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? यी कुरा जान्नै पर्छ
काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ ले गरेको परिभाषा अनुसार वैदेशिक रोजगार भन्नाले नेपाली नागरिकले विदेशमा पाउने रोजगार सम्झनु पर्दछ भनेर